Ny seho fizahantany New Caledonia fizahan-tany dia iray ihany no tanjon'ny Eoropeana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny seho fizahantany New Caledonia fizahan-tany dia iray ihany no tanjon'ny Eoropeana
Delegasiona iray avy amin'ny fizahan-tany any New Caledonia (Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud) notarihin'ny lefitry ny tale jeneraly lefitra, Ramatoa Julie Laronde, no nijanona voalohany sy tokana tamin'ny fizotran'ny lalana eropeana iray tany Milan, Italia.
"Mino mafy ny tsena italiana izahay [noho ny] fahaizany lehibe ho an'ny mpandeha mitady toerana tsy mahazatra sy ny tsena manokana toy ny antsitrika sy ny volan-tantely," hoy i Julie Laronde.
Eoropa ho azy ireo no manana ny mety indrindra, miaraka amin'ny fahatongavana amin'ny 2018 mitovy amin'ny 35% amin'ny 120,000 XNUMX mahery, mihoatra ny frantsay rehetra, arahin'ny Alemanina sy Italiana (tokony ho arivo isan-taona).
"Ny tanjona dia ny hahatratra 200,000 2025 ny mpizahatany amin'ny taona 3, mifantoka amin'ny famaky paikady telo lehibe: ny harena amin'ny biodiversité, ny kolontsaina eo an-toerana ary ny fanolorana safidy lehibe ho an'ny hetsika ivelany," hoy i Laronde nanampy.
New Caledonia dia mipoitra amin'ny toerana vaovao sy sarotra ary feno. Io no safidy hafa any Pasifika izay ahafahanao tsy mifanena amin'ny mpizahatany hafa (latsaky ny 1 isaky ny kilometatra toradroa), miaraka amin'ny flora sy ny biby endema 76%, ny toetr'andro 25 ° Celsius mandritra ny taona, ary ny famantarana ny dia samihafa.
Ireo faritra 5 raha ny marina dia miantoka ny moron-dranomasina tonga lafatra amin'ireo nosy: manomboka amin'ny Loyauté ka hatrany Isola dei Pini malaza, voarara ny «sunscreens» tsy organika, hatrany amin'ny riviera-style Riviera sy ny fiainana amin'ny alina any renivohitra Noumea. Misy hetsika soavaly, golf ary toerana malalaka andrefana any amin'ny morontsiraka Andrefana. Ny foko Karnak eo an-toerana amin'ny morontsiraka atsinanana sy ny dia fitsangatsanganana an-tsokosoko an'ny Australia dia miandry ny hampiala-voly, ary ny fizotran'ny trozona dia eo anelanelan'ny Jolay sy septambra any Great South, ary vatoharan-dranomasina saika virjina no fehezin'ny manam-pahaizana UNESCO isan-taona.
Ao amin'ny tetik'asa fitomboany, ny andrim-panjakana dia nanangana fampielezan-kevitra amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena miaraka amin'ny tetibola eoropeanina nisondrotra 11% izay manodidina ny lagoon amin'ny endrika fo miaraka amin'ny karama "ny fonay dia mitempo ny fonao" amin'ny dokambarotra (an-tserasera ihany ) izay mandre fotsiny ny fitempon'ny fo sy ny feo voajanahary.
Hetsika marobe eo amin'ny tsena Italiana, miaraka amin'i New Caledonia no niasa tamina hetsika marketing niaraka tamin'ny mpandraharaha mpizahatany 10-12 ho an'ny hetsika, fitsangatsanganana ary fiofanana momba ny varotra, dia ampitaina amin'ny mpanjifa farany ihany koa, miaraka amin'ny fanokafana ny pejy Facebook ao amin'ny Italiana sy ny fanombohana ny tenifototra #viaggiaconilcuore. Ny zotra nalehan'ity andrim-panjakana ity hisarihana ny mpizahatany dia misy koa ny mpandraharaha eo an-toerana, anisan'izany ny banky, miaraka: ny renirano Aircalin dia manavao ny fiaramanidina, tonga ny hotely lehibe ao Lifou, ny lehibe indrindra amin'ireo Nosy Loyalty, ary any Noumea izay hisy sisin-dranomasina vaovao tongasoa ny mpandeha sambo miaraka amin'ny faritra mpandeha an-tongotra miaina.
Lany ny lalàna: Tsy misy intsony Aloha mankany amin'ny AIRBNB na mpizahatany Home Away any Oahu
Performance Managementity Hospitality dia manonona VP vaovao an'ny Serivisy ara-barotra